SHEEKO NAXDIN LEH SUBXANALLAH Inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun!!! | Gaaloos.com
Home » galmada » SHEEKO NAXDIN LEH SUBXANALLAH Inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun!!!
SHEEKO NAXDIN LEH SUBXANALLAH Inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun!!!
Waa sheeko naxdin leh. Waa arrin caadi ah in rag iyo dumar is shukaansadaan. Waana wax waligeed soo jirtay kana dhaxalnay waalidkeen, iyaguna ka dhaxleen waalidkood.
Sidii dagaalkii sokeeye u dhacay ama haddaba si dadban u socda, dadka soomaaliyeed waxay noqdeen kuwo u kala yaacay dunida, hadba meeshuu ilaahay ugu talagalay in naftaas ku noolaato oo ku badbaado.
Dhallinyaradii guurdoonka ahayd waxay caado ka dhigteen in mid walba uu shukaansi u doonto waddamado kale(waddan aan ahayn waddanka ay ku noolyihiin). Kadib markay isfahmaan labadaas qof waxaa dhacda in midkood kan kale ka soo bixiyo tigidhka.
Haddaba su’aasha dadka qaarkiis isweydiiyaan waxaa weeye maxay dhallinta isku waddanka joogta isku shukaansan waayeen???.
Jawaabtii dumarka: Maxaan ku falayaa nin aan aqaan wuxuu subixii ilaa gabaldhicii sameeyo, waxaa ii dhaama mid anigana i aqoon, anigana isaga aqoon, dabadeedna labadeenaba isku cusboonaanno.
Jawaabtii ragga: Maxaan ku falayaa dumarka jooga waddanka aan joogo, waan la socdaa waxay qabtaan marwalba.
Arrinta sidaas ah waxay Rag iyo dumar badday waxaan laga sheekeyn karin. Sheekadaan aan idiinkaga sheekaynayo ayaa ka dhalatay.
Waxaa isbartay labo qof oo dhallinyar. Waa wiil iyo gabar soomaaliyeed, ma doonayo inaan sheego magacyadooda iyo waliba dalalka ay joogaan, waayo waa arrin aad iyo aad xun waxay la kulmeen kana baqayo inay noloshooda iyo dadka la xiriira waxyeelo gaarsiiyo.
Gabarta waa gabar soomaaliyeed, da`deedana waxay jirtaa 21, waligeed maysan guursan. Waxay ku nooshahay waddanka Ingiriiska.
Waxay waddanka Ingiriiska soo gashay horraantii sagaashankii, taasoo ku soo gashay baasaboor sixiibteed oo waddanka ingiriiska deggan lahayd, kana soo gashay waddanka Kenya. Gabadha saaxiibadeed ayaa u noqotay macalimad tusta sida waddooyinka loo maro iwm.
Gabarta waxay kenya uuga soo kacday gabar walaasheed ah iyo hooyadood. Wiil ay walaala yihiinna wuxuu deggan yahay USA.
Wiilka waxaa halkaas u kexeeyey reero ay isku bah meel ka soo wada jeedaan oo u soo baxday dalkugalka waddanka maraykanka, kuna kaxeeyey inuu wiilkooda yahay 1991.
Wiilka iyo gabarta waxaa iskuugu dambaysay sagaashankii.
Waxaa jira waayadaan dambe in soomaalida ku dhaqan dhammaan dunida oo dhan ay ku wada xiriiraan internetka. Waxaa jira meelo badan oo ay ku wada sheekaystaan dadka sida midka caanka ee ay soomaalida ku wada sheekaystaan oo la yiraahdo PALTALK.
Paltalk waa khaanad lagu sheekaysto oo internetku leeyahay, wuxuuna u qaybsamaa afaf badan. Afka soomaalida dadka soo galaa waa ay badan yihiin. Qof walba qolkuu doono ayuu galaa. Waxaa jira qolal badan sida qolka qabiilka, shukansiga, quraanka, odoyaasha, qolka khaniisyada(waxaad arkaysaa nin raadinaya nin utaga) waana soomaali.
Paltalk waxaa qolka shukaansiga isku bartay labada qof ee aan dusha ku soo sharxay. Sida caadiga ah qolka shukaansiga dadka soogala waa dad magacyada ay isticmaalaan bedelay iyo emailkoodaba. Waxaa halkaas isku bartay labadii qof ee dhallinyarada ahaa qof walba wuxuu qofka kale u sheegtay waddanka uu deggan yahay mid aan ahayn iyo waliba magac been.
Labadii qof waxay muddo badan wakhtigoodii ku dhumay siduu midba u korfadhiyey kumbuyuutarka oo ay sheekooyin isku dhaafsanayeen, dhan walba waa ay ka sheekaysteen xagga galmada, xagga muuqaalka qofwalba uu leeyahay iwm.
Wiilka wuxuu aad u jeclaystay gabadhaas sida wanaagsan ee ay u hadlayso, wuxuuna uga sheekeeyey wiil ay aad u saaxiib yihiin. Gabadhiiba gabadii saaxiibteed ahayd ayey uga sheekaysay wiilka ay baratay.
Palktalk wuxuu sahlaa waxyaabo badan in labada qof ay isla hadlaan ama kaamiro isku soo horfariistaan oo halkaas iska daawadaan, wada sheekaystana.
Wiilkii wuxuu ka codsaday gabadhii inay kaamiro soo gadato, isagana waa uu soo gatay. Wiilkii saaxiibkiis ahaa ayuu u sheegay in gabadhii soo iibsanayso maanta kaamiro si layskaga arko. Wuxuuna ka codsaday inuu caawa raaco oo arko gabadha siday u egtahay.
Labadii qof sidii u caadiga ahayd ayuu qofba dhankiisa ka soo galay paltalk. Qofba qofkii kale ayuu arkay isagoo ku dhexjira. Waa laysi salaamay.
Muddo markay sheekaysanayeen ayaa wiilkii ka codsaday haddii ay kaamiro soo gadatay inay u shido kaamirada, kana codsaday iyadoo qaawan soo horistaagto, kana bilowdo tusida jirkeeda lugaha korna ugu socoto ilaa timaha.
Gabadhiina iyana waxay tiri adiguna sidaas oo kale ayaad samaynaysaa oo adiga bilow. Muddo markay isku jiid jiidayeen adiga horbilow maya adigu bilow. ayey go’aan ku gaareen inay isku mar bilaabaan.
Sidaas ayey isku mar u bilaabeen in qofba qofka kale tuso oo gadiisa.
Lugihii ilaa xabadka qofba qofka kale waa uu la dhacay, oo qofba qofka kale yiri aad baad u jir qurxoon tahay. (waxaan aad iyo aad idinkaga codsanayaa inaan wax badan ka tilmaami karin sida xun ee ay jirkooda isku tuseen oo ahayd wax aad u xun waxyaabaha ay kuwada hadlayeen sida kala qaad lugahaaga iwm)
Wiilka saaxiibkiis aad ayuu ula dhacay oo intaas suulka kor ugu taagayey saaxiibkiis kuna adkaynayey inuu sidaas ku wado.
Hal mar ayuu wiilkii kumbuyuutarkii ku soo booday oo damiyey markuu arkay wajigii gabadha(laga yaabe inay iyadana sidaas u damisay). Saaxiibkiis ayaa ku qayliyey oo yiri „miyaad waalan tahay maxaad nooga daminaysaa kumbuyuutarka, noo daar aanu gabadha daawanee adiga haddii aadan rabin anigaa rabee“.
„Haddii aad daarto kambuyuutarka aniga iyo adiga mid baa dhimanaya!“ayuu wiilkii shukaansanayey gabadha yiri.
„Maxaad ka wadaa“ oo isku dayey inuu daaro.
Labadii wiil ayaa gacan iskuula tagay. Saaxiibkii ayaa yiri ninyahow waxaaga xanaaq ka weyne gabadha ma walaashaa baa?.
„Haa“ waa walaasheey. Mana doonayo intaan duninda saaranahay in aan arko.
Wiilkii wuxuu noqday in marka dumar soomaaliyeed ku soo baxaan uu ka leexdo wadada wuxuuna ku dhaw yahay waali.
Title: SHEEKO NAXDIN LEH SUBXANALLAH Inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun!!!